Ama-Cafes Archives - IntoKildare
Noma ngabe ufuna ukuthatha ikhofi usohambeni, noma uhlale uphumule futhi ubuke umhlaba udlula, iKildare inama-cafe amaningi ahambisana nakho konke ukuthanda.
Thai Asian Indian Chinese Spanish Italian Imifino / imifino American I-Irish / iYurophu Modern Isitolo sezibiliboco French
IGastro-Pubs Ukudla Okuvamile Ukudlela Kwangaphandle Umculo Wokuphila Tea Wasemini Ukudlela Okuhle
IFirecastle yigilosa lobuciko, idelicatessen, indawo ekubhakelwa kuyo kanye nekhefi elinesikole sokupheka kanye namakamelo okulala izivakashi ayi-10.
Isikhungo saseJohnstown Garden
Ukukhethwa kwezitshalo ezinkulu kunazo zonke e-Ireland kanye neSitolo Sengadi endaweni ekhanyayo yezitolo yesimanje, indawo yokudlela kanye neCafé Gardens.
Umgwaqo 14 Mayfield
Isiteshi senkonzo yezimoto esisemgwaqweni u-M7 eMonasterevin, isitobhi esihle ohambweni lwakho.
Isikole Sokupheka saseKalbarri
IKalbarri yisikole sokupheka esisebenza emndenini kanye nebhizinisi lokupheka elisebenza lisuka eKilcullen eC .. Kildare. Ngokugcizelela ukupheka okwakhayo komndeni kusuka kuzithako ezintsha, uSiobhan Murphy naye […]
Ngamahora amaningi omnandi i-KBowl yindawo ozoba nayo ne-bowling, indawo yokudlala yezingane yaseWacky, iKZone neKDiner.
IKildare Farm Foods Open Farm & Shop
Umuzwa ovulekile womndeni ovulekile wepulazi, lapho uzobona khona izinhlobo eziningi zezilwane zasemapulazini ngendlela yemvelo futhi ekhululekile.
Jabulela ukuthenga okunethezeka emoyeni eKildare Village, okuphelele ngama-boutique ayi-100 okunikeza ukonga okuphawulekayo.
INewbridge Silverware Visitor Center iyipharadesi lomthengi wamanje eliqukethe iMuseum of Style Icons edumile kanye neFactory Tour eyingqayizivele.
Ikhafeyi Yemakethe yaseShoda
Ukudla okuhle okunempilo nge-twist eyingqayizivele eshadelwe ngensizakalo ethandekayo neyomuntu siqu.
Ikhefi engaphelelwa yisikhathi
I-Timeless Café itholakala edolobheni elihle laseKilcock. Kungakhathaliseki ukuthi ibhulakufesi, isidlo sasemini noma i-brunch, i-Timeless Café iyindawo ongaya kuyo ngemenyu enhle egcwele […]
Amagumbi Etiya E-Victoria
Ukudla okusezingeni eliphakeme namakhekhe esimweni esiyingqayizivele sezakhiwo zamapulazi zamatshe zekhulu le-18.